အသည်းကင်ဆာဝေဒနာသည် သူငယ်ချင်းကိုဘယ်လိုကူညီ မလဲ - Hello Sayarwon
အသည်းကင်ဆာဝေဒနာသည် သူငယ်ချင်းကိုဘယ်လိုကူညီ မလဲ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းအရ ၂၀၁၂ ခုနစ် တွင် အသည်းကင်ဆာသည် သေဆုံးမှုပေါင်းအကြမ်းအား ဖြင့် ၇၄၅၀၀၀ ကို ဖြစ်စေသည်။ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက်၊ အိမ်နီးချင်းတွင် ကင်ဆာရှိသည်ဟုသိရှိရပါကသင် သည် ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုစူးစမ်းမိမည်။ သင့်သူငယ်ချင်းတွင် ကင်ဆာဖြစ်ပါကသင့်အတွက် နည်းလမ်းအချို့ကိုပြော ပြပါမည်။
သင့်သူငယ်ချင်းသည် အကူအညီတောင်းရန် ခက်ခဲနေ နိုင်သည်။ သို့သော်လည်းနေ့စဉ် တောက်တိုမယ်ရအလုပ်များကိုကူညီပေးခြင်းသည် သင် လုပ်ပေးနိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။ ဈေးဝယ်ပေးခြင်း၊ ကလေးထိန်းပေးခြင်း၊ ကျောင်းမှ ကလေးကြိုပေးခြင်း၊ အဝတ်လျှော် ခြင်းစသည်တို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သည် သင့်မိသားစုဖြင့် အပြင်သွား၍ ဈေးဝယ်ရန် ရှိပါကသင့်သူငယ်ချင်းအားဖုန်းခေါ်၍ သင်ဘာဝယ်လာရမလဲကိုမေးမြန်းပါ။ သင် ပြုလုပ်လိုသောအလုပ်များကိုစာရင်းပြုစု၍ သင်ဘယ်လိုကူညီနိုင် သည်ကိုသင့်သူငယ်ချင်းအားမေးပါ။
နားထောင်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအကူညီပေးရာရောက်သောအရာဖြစ်သည်။ စကားစမြည်ပြောခြင်းကိုဘယ်လိုစတင်ရမည်ကိုမသိပါကထိုသို့ပြောသင့်သည်။ “မင်းနေရခက်တယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်ကွာ’’ သို့မဟုတ် “ခက်ခဲလွန်းလို့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိပါဘူးကွာ” အစရှိ သည်ဖြင့် စတင်ပြောပါ။ ဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်နေခြင်းထက် အဖြစ်အပျက်ကိုဝန်ခံပြောဆိုခြင်းသည် ပို၍ နည်းလမ်းကျပါသည်။
အလားတူပင် သင့်သူငယ်ချင်းကိုဘာပြောချင်သလဲသိရှိ ရန် စကားအရိပ်အမြွက်ကိုရှာပါ။ လူနာများသည် သူတို့၏ သူငယ်ချင်းများကကင်ဆာအကြောင်းမဆွေးနွေးလိုခြင်းကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တတ်သည်။ လူများသည် ဒေါသထွက်ခြင်းမှာထိုအကြောင်းအရာအားဆွေးနွေး ရန် အချိန်ယူထားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းအခြားသူများသည် ကင်ဆာနှင့် ကုသမှုထက် အခြားအရာများအကြောင်းပြောခြင်းကိုပိုကြိုက်သည်။
သင်ဘာပြောသင့်သည်ကိုမသေချာပါကထိုသို့ပြောပါ။ “ဒီအကြောင်းမင်းပြောချင်လား’’ “ပြောမယ်ဆိုငါနားထောင် ပေးမယ်’’ “မပြောချင်လဲနေ့လယ်စာစားပြီးအိမ်နီးချင်းအတင်းတွေ ပြောကြမယ်လေ” အစရှိသည်ဖြင့် ပြောပါ။
လူများသည် လူနာများအပေါ်သာအာရုံစိုက်ကြ၍ လူနာများကိုစောင့်ရှောက်သူများအားဘယ်လိုလုပ်ကိုင်နေကြသည်ကိုမေးမြန်းရန် မေ့နေကြသည်။ စောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် ရှိပြီးသားအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ရင်းရောဂါရှိသူ၏ အလုပ် များကိုပါ တာဝန်ယူရပါသည်။
သင်သည် ကလေးများကိုတစ်ညတာထိန်းပေးခြင်းသို့ မဟုတ် အားကစားစင်တာသို့ ခေါ်ဆောင်ပေးခြင်းစသည်တို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ စောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် ကော်ဖီတစ် ခွက် သွားရောက်သောက်စဉ် ဆေးရုံခန်းထဲတွင် ထိုင်ပေးခြင်းသည်လည်းကူညီရာရောက်ပါသည်။
ပထမအကြိမ် ရောဂါအဖြေရှာပြီးနောက် ဆက်လက်အားပေး မှုပြုပါ။
လူနာသည် ထောက်ပံ့မှုလိုသည်မှာရောဂါအစတွင်သာမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် ဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးအကူအညီလိုအပ်သည်။ အကူအညီသည် ဆေးရုံတက်စဉ် သို့မဟုတ် ပထမအကြိမ် ရောဂါအဖြေရှာပြီးချိန်သာလျှင် လိုအပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
သင်သည် ဘာသာရေးအဖွဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ် အလားတူအဖွဲ့အစည်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါကထောက်ပံ့မှု ပြန့်ပွားစေရန် သင့်အဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းပါ။
အရေးကြီးသည်မှာ ဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက် လူနာကိုစိတ်ထဲတွင် သတိရနေပါ။ သူသို့မဟုတ် သူမ၏ ပင်ကိုစရိုက်၊ သက် တောင့်သက်သာရှိမှု ပမာဏ၊ ကြိုက်မှု မကြိုက်မှု နှင့် လိုအပ် သည်များကိုစဉ်းစားပါ။
သင့်သူငယ်ချင်းသည် အသည်းကင်ဆာရှိသည်ဟုသင် သိရပါကဝမ်းနည်းစရာဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရင်းသင်နှင့် သင့်သူငယ်ချင်းများကြားရှိ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက် စေရန် ဖြစ်သည်။ အောက်ပါ နည်းလမ်းများသည် သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် ဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေရန် ကူညီနိုင် သည်။
Supporting friends who has cancer. http://www.cancer.net/coping-with-cancer/talking-with-family-and-friends/supporting-friend-who-has-cancer. Accessed February 10, 2017.
How to BeaFriend to Someone With Cancer. http://www.cancer.org/treatment/understandingyourdiagnosis/talkingaboutcancer/how-to-be-a-friend-to-someone-with-cancer. Accessed February 10, 2017.
10 Tips for SupportingaFriend with Cancer. https://www.mskcc.org/blog/10-tips-supporting-friend. Accessed February 10, 2017.